हाम्रो बारेमा - Quanzhou Bangni जैव प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड
Quanzhou Bangniकार्यात्मक insoles, polyurethane insoles र विभिन्न देशहरूमा बहु ग्राहकहरु र ब्रांडहरु लाई खुट्टा हेरचाह उत्पादनहरु को अग्रणी निर्माता हो। हामी रचनात्मक र एर्गोनोमिक ईन्सोल उत्पादहरूको डिजाइन, विकास र उत्पादन गर्न प्रतिबद्ध छौं। हाम्रो उत्पादन दायरा: ओर्थोटिक insoles, PU insoles, बूस्ट insoles, Poron / जेल खुट्टा हेरचाह उत्पादनहरू र तातो मोल्डेबल insoles हो। यहाँ, हामी इन-हाउस ग्राफिक्स डिजाइन, उत्पाद डिजाइन, मोल्ड बनाउने, नमूना बनाउने, उत्पादन निर्माण, प्याकेजि solution समाधान र शिपिंग सेवा प्रस्ताव गर्दछौं। हामीसँग OEM र ODM मा पनि धेरै शक्तिशाली क्षमताहरू छन्। हाम्रो कारखाना एक 00 75०० M2 उत्पादन केन्द्र हो र १०० भन्दा बढी कर्मचारीहरू छन्। हाम्रो स्थिर र विविध आपूर्ति च्यानलको साथ हामी ग्राहकहरूको विचारलाई छिटो उत्पादनमा बदल्न सक्छौं। साथै हाम्रो परिपक्व मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर हामी छिट्टै उत्पादनहरूलाई उच्च-प्रभावकारी उत्पादनमा परिवर्तन गर्न सक्दछौं।
हामीसँग ज्ञान, जनशक्ति र उपकरणहरू छन् तपाईलाई काममा मद्दत गर्नका लागि। अधिक जानकारी को लागी वा उद्धरण अनुरोध गर्नका लागि कृपया आज हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् — हामी तपाईं र तपाईंको टीमको सुनुवाईको लागि तत्पर छौं!
औद्योगिक शीर्ष निर्माता हुन
नवीनता र समावेशीकरण
ग्राहकहरूको लागि मूल्य सिर्जनामा ​​फोकस गर्नुहोस्
ग्राहकको सेवा गर्नुहोस्, कर्मचारी मूल्य प्राप्त गर्नुहोस्, समाजमा योगदान दिनुहोस्
सटीक र समयनिष्ठ
बंगनी मात्र एक उत्पादन कारखाना हो; यो पनि एक कम्पनी हो कि आफैंलाई समर्पित एक सम्मानजनक, समावेशी, संचार र भरोसा कार्य वातावरण सिर्जना गर्न।
सबै तहमा कर्मचारीको सहभागिता हाम्रो अद्वितीय बंगनी संस्कृति निर्माणको लागि महत्वपूर्ण छ
त्यसोभए हामी कसरी आफ्नो कम्पनीको संस्कृति निर्माण गर्छौं, हामी यसलाई तीन तरिकाले कार्य गर्दछौं:
१. दैनिक प्रसारण: हामी हाम्रा कामदारहरूलाई उनीहरूको अनुभव, उनीहरूको सुझाव वा काम, कम्पनी वा जीवनको बारेमा उनीहरूको भावना लेख्नको लागि खाली समय प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्दछौं। त्यस दिनको बिहान हामीसँग दैनिक बैठक छ, हामी हाम्रो कार्यकर्तालाई उनको निबन्ध विस्तृत गर्न आमन्त्रित गर्नेछौं। बर्षको अन्त्यमा, हामी सबै राम्रो निबन्धहरू एकत्रित गर्नेछौं एउटा वार्षिक पुस्तक प्रकाशित गर्न - बंग्नी भ्वाइस
२. मासिक पत्रिका: प्रत्येक महिना, हाम्रो प्रचार विभागले हाम्रो कम्पनीले गरेको सबै प्रगतिहरू र सबै सक्रियहरू अद्यावधिक गर्न एउटा ब्रोशर प्रकाशित गर्दछ।
Team. टीम निर्माण गतिविधिहरू: खेलहरू खेल्दै, एक अर्कासँग सञ्चार गर्नुहोला वा आरामदायी खाना खाँदै।
बंगनीमा हामी हाम्रा ग्राहकहरु र हाम्रा कर्मचारीहरु प्रति उत्तरदायी छौं। हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई सेवा र उत्पादनहरूको उत्तम गुणवत्ता प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं। त्यहि समयमा, हामी पनि हाम्रो कर्मचारीहरूको लागि एक सुरक्षित र मैत्री काम वातावरण प्रदान गर्न मा ध्यान केन्द्रित गर्दछौं। हामीले पर्यवेक्षणहरूको लागि स्वयम्सेवा गरेका छौं।
व्यवसाय सामाजिक अनुपालन पहल
BSCI व्यवसाय सामाजिक अनुपालन पहल